Nokia 7 Plus, iray amin'ireo mpihetsiketsika ao amin'ny MWC 2018 dia hita | Vaovao momba ny gadget
Nokia 7 Plus, iray amin'ireo mpihetsiketsika ao amin'ny MWC 2018 dia hita
Ruben gallardo | | Finday
Nokia tsikelikely dia manaitra ny fahalianan'ny besinimaro. Eny, somary tara ianao tamin'ny fakana ny iray amin'ireo rafitra fiasa malaza indrindra eto an-tany. Inona koa, io no sehatra lehibe indrindra any Espana, ary hatreto. Fa tsara, ny fandefasana ny orinasa farany, miaraka an-tanana amin'ny HMD Global, dia miteraka fientanam-po.
Ny Mobile World Congress 2018 dia manakaiky am-pahefana ary ho an'ny hetsika efa nomanin'izy ireo, ekipa lehibe ary izany dia ho andiany miampy an'ny Nokia 7. Amin'ny andrana fampisehoana sasany Nokia 7 Plus ary misaotra azy ireo izahay afaka milaza aminao ny toetra teknika vitsivitsy.
Ity Nokia 7 Plus amin'ny ho avy ity dia hiditra tanteraka eo afovoany. Ho solosaina iray izay hanana ny Android farany --Android 8.0 Oreo—, ankoatry ny fananana a RAM 4GB ary processeur nosoniavin'i Qualcomm. Miresaka izahay Snapdragon 660. Ity puce ity, somary matanjaka kokoa noho ilay nitaingenan'ny zandriny lahy Nokia 7, dia maodely maoderina, ary noho izany, mahomby kokoa noho ny hafa manana fotoana kely kokoa.
Toy izany koa, voalaza fa ny GPU ampidiriny dia manome fahombiazana tsara amin'ny fitsapana. Ary, noho izany, hiatrika ambaratonga midadasika ho avy mahery kokoa noho ny ankehitriny isika. Ankehitriny, io ihany no azonay omena anao momba ny Nokia 7 Plus mety ho hitantsika any Barcelona afaka herinandro vitsivitsy. Tsy misalasala izany izahay ny faran'ny famolavolana dia ho voavaha tsara toy ny nahazatra antsika.
Na dia, angamba, ny zavatra tena mahaliana momba an'i Nokia nandritra ny fijanonany tao Barcelona dia ny sainam-pireneny manaraka, ny Nokia 9. Iray amin'ireo mpihetsiketsika tamin'izany andro izany Ary izany dia manana zavatra betsaka holazaina amin'ny farany. Ho hitantsika hoe inona ny vidiny ary inona indray no anjara birikiny mba hiasa ho toy ny fitakiana eo imason'ny mpihaino kendreny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Nokia 7 Plus, iray amin'ireo mpihetsiketsika ao amin'ny MWC 2018 dia hita
Vivo's XPlay7 no finday voalohany misy 10 GB RAM
Ilay mpihira 50 Cent dia lasa mpanapitrisa aorian'ny fanekena an'i Bitcoins amin'ilay rakikira navoakany tamin'ny 2014